Dowladda Somalia oo 5 qodob ku wajaheysa Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 3 April 2015 3 April 2015
Mareeg.com: Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay iney meel mariyeen shirciga waxa loogu yeero la dagaallanaka argagixisada.
Wasiirka Amniga Qaranka, C/razaaq Cumar Maxmed ayaa golaha wasiirada soo hor dhigay Hindise Siyaasadeed lagula dagaalamayo argagaxisada, loogan hortagayo amni xumada.
Golaha Wasiirada ayaa dood dheer kadib ansixiyey Hindise Siyaasadeedka Istiraatiijiyada la dagaalanaka waxa loogu yeero Argagaxisada, oo u jeedkiisu yahay in dowaldu yeelato qorshe dhamaystiran oo lagula dagaalamayo Alshabaab, sida lagu sheegay war kasoo baxay dowladda Soomaaliya.
Haddaba dowladda ayaa sheegtay in qorshaha la dagaalanka Alshabaab uu leeyahay 5 tiir oo kala ah, waxeyna u qornaayeen sidan:-
1- Dowladda Soomaaliya, iyadoo qorshe cad ka yeelatay la dagaalanka argagixisada ayay xoojineysa xag milateri iyo xag sirdoon.
2- Dowladda Soomaaliya waxey xooga saareysaa dhamaan xasillinta dhamaan deegaanada laga saaray Alshabaab, iyadoo ahmiyad la siinayo sarreynta sharciga iyo dowlad wanaagga.
3- Dowladda Soomaaliya waxey sameysay qorshe looga soo kabanayo weerarada gurracan ee argagixisadu u geysato umadda Soomaaliyeed.
4- Dowladda Soomaaliya waxey sameysay Istiraatiijiyad ku aadan in 1 cod Shacabka Soomaaliyeed ugu gudbiso waxyaabaha ku saabsan wararka xagjiriinta Soomaaliya.
5- Dowladda Soomaaliya waxey dhaqan badelled ku sameyneysaa dhallinyarada ay marin habaabiyeen argagixisada, waa sida warka loo dhigaye. Dowladda ayaa sidoo kale, sheegeysan iney amaan siin doonto saraakiisha Alshabaab ee isu sii dhiiba, kana baxa ururkaas.